Boob loo gaystay MSF ayaa sababay in ay hakiso shaqadii ay kawaday Jilib, Soomaliya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Boob loo gaystay MSF ayaa sababay in ay hakiso shaqadii ay kawaday Jilib, Soomaliya
18.08.2009 | Gobolka Jubadda Hoose, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
Daryeelkii caafimaad ee loo fidinayay bulshada ku nool degmada Jilib ee Jubada hoose, Somaaliya ayaa halis ku jira kadib markii la boobay rug caafimaad oo hey’adda samafalka biniaadminimo ee caafimaadka ee MSF ay gacanta ku haysay.Daryeelkii caafimaad ee loo fidinayay bulshada ku nool degmada Jilib ee Jubada hoose, Somaaliya ayaa halis ku jira kadib markii la boobay rug caafimaad oo hey’adda samafalka biniaadminimo ee caafimaadka ee MSF ay gacanta ku haysay.
Rag hubaysan ayaa soo weeraray xarunta nafaqaynta carruurta horaantii todobaadkan, kuwaas oo qaatay sahay amba alaabo caafimaad oo aad muhiim ugu ahayd bulshada loogu talogalay ee soomaliyeed. Arrintaas ayaa khasabtay in MSF ay hakiso hawlihii ay kawaday halkaas. 330-carruur ah oo aad ay nafaqo xumo u hayso ayaa hadda aan haysan daryeel caafimaad oo aad muhiim ugu ah.
“magaalada Jilib ayey haysaa cunto yari aad u ba’an, iyada oo nafaqadarriduna ay ku tahay dadka kunool aagaasi xaalad caafimaad oo aad halis u ah” waxaa sidaas u faahfaahiyay Madaxa ergada MSF Karin Fisher, “ Waxaa nasiibdarro ah in dadka magaaladaasi ku nool kuwoodii ugu tabarta darnaa khaasatan caruurta in ay yihiin kuwa ay sida aadka ah u wax yeeleynayso arintaan. Waxaa si aad ah muhiim u ah in kuwa ay saamaysay nafaqadarradu ay helaan daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah hadda iyo mustaqbalkaba. Taas la’aanteedna waxay halis galineysa nolosha dad farabadan”
MSF waxay u fidisaa daryeel caafimaad dadka kunool wadanka soomaaliya, daryeelkaas oo kusalaysan baahida caafimaad ee jirta iyadoo aan u eegeyn xiriir siyaasadeed ama mid qabiil toona. Hawlaha daryeelka caafimaad ayaa waxaa fuliya shaaqaale soomaliyeed oo ay caawinayaan kooxda maamulka ee ku sugan Nairobi.
Hadii aynu nahay urur ka kooban shaqaale takhasus u leh caafimaadka iyo shaaqalaha caawinta(sida kuwa saadka iyo maamulka), MSF waxaa ka go’an inay daryeel caafimaad u fidiso bulshada soomaaliyeed sidii ay horeyba ugu wadday daryeelkaasi laga soo bilaabo 1992-dii. Hase yeeshee falalka kadhanka ah ee lagula kacayo adeegyada heya’dda iyo shaqaalaheeda ayaa ka hor taagan in fidiso daryeelka caafimadka ee ay aadka ugu baahantahay bulshada soomaliyeed.
MSF waxay ugu baaqaysaa dhamaan kuwa dagaalamaya iyo maamulada jirba in ay xaqdhawraan xaruumaha iyo shaqaalaha caafimaadka si soomaalida oo idil rag, dumar iyo caruurba ay u wada helaan daryeel caafimaad .
WAXQABADKA MSF EE GUDAHA SOOMALIYA
Sanadkii 2008dii heya’dda MSF waxa ay samaysay 727,428 la-talin bukaan-socod , oo ay ku jirto 267,168 la-talin caafimaad oo la siiyey carruur ay da’doodu ka yar tahay shan jir. In ka badan 55,000 oo haween uur leh ah ayaa heley daryeelka la-talinta caafimaad ee dhalmada ka horeysa waxaana 24,000 qof oo bukaan-jiif ah la dhigey cusbitaallada iyo xarumaha caafimaadka ee ay MSF taageerto. Waxaa la sameeyey 3,878 qalliin, 1,249 ka mid ahi ay ahaayeen dhaawacyo ay sababeen rabshado. Kooxaha caafimaadku waxa ay 1,035 qof ka daweeyeen cudurka dilaaga ah ee la iloobay ee kala azar, in ka badan 4,000na duumo (malaariya) iyo 1,556 qofna waxaa loo bilaabey daawada qaaxada. Ku dhowaad 35,000 qof oo la silcayey nafaqo-darroo ayaa la siiyey cunto iyo daryeel caafimaad, 82,174 oo tallaalnawaa la bixiyey.
Tags: boob, caruur, hub, Jilib, joojin, nafaqo, shaqo